amakhono Project - Besca Industrial Co., Ltd.
Kanye olunzulu eshalofini ububanzi, Besca banganikeza izixazululo ehambisana kuphrojekthi yakho nge onguchwepheshe bumbela wethu amakhono ...
Besca uyakhile idumela enviable ngaphakathi embonini yezokwakha ngokukhulula amaphrojekthi ngesikhathi futhi ngaphakathi isabelomali. Lesi sitatimende elula liye laba yitshe legumbi ibhizinisi lethu, ngaleyo ndlela kokweqa ezingeni okulindeleke yesevisi nokwethembeka ukuthi ubalulekile izimakethe lanamuhla ukuncintisana.
Sinesibopho division ubunjiniyela kanye nezimo yokukhiqiza amakhono ukuthi sikwazi ukuhlangabezana noma iyiphi izidingo amaphrojekthi eziyinkimbinkimbi nge zonke izinhlobo zobubi kepha 41mm strut isiteshi kanye ubakaki , ikhebula ugqoko kanye laddder e steel, i-aluminiyamu nezinye zu. Kanye amabanga wethu ajwayelekile nosayizi wale mikhiqizo, esingakunikela izinguqulo ngokwezifiso ukuhlangabezana nezidingo ezikhethekile ukuthi ungase ube zewebhusayithi yakho kanye nezidingo ukwesekwa.
Besca ibekwe kahle ukuhlangabezana yini izimfuno emakethe izixazululo ngezifiso kuyo yonke imikhakha esindayo zezimboni kuhlanganise kagesi, imayini, Iwoyela negesi, amanzi, Petrochemical, Commercial Ukwakhiwa (kuhlanganise nalabo izidingo ezikhethekile yezakhiwo) kanye nezimboni efanayo ngokusebenzisa yethu esibanzi yokukhiqiza izindawo .
Siyamukela njalo imidwebo yakho lobuchwepheshe futhi uthathe-offs ngoba nekhotheshini, futhi onjiniyela bethu ingasebenza nawe ukuze kulekelelwe ukubaluleka ezihamba phambili kusukela umkhiqizo wakho wokugcina. ukuqhutshwa komsebenzi wethu Seamless ikhuthaza nesimiso athishela ukukhiqizwa ngekuhlela yethu ehambisana ukukhiqizwa, shift ukuphathwa kanye zabasebenzi bethu multi onekhono, yingakho ukuqinisekisa ukuthi ukuhlangabezana futhi idlule nanoma iyiphi inselele ngokuphumelelayo zonke amaphrojekthi ngobukhulu futhi eyinkimbinkimbi kunazo ngaphakathi izimboni abafanele.
Ake Besca ukusebenza nawe ku isixazululo ofanelana iphrojekthi yakho esilandelayo esiyingqayizivele.